अफ्रिका जाँदै हुनुहुन्छ? 'एलो फिबर' विरुद्धको खोप किन लगाउने? :: डा शेरबहादुर पुन :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
अफ्रिका जाँदै हुनुहुन्छ? 'एलो फिबर' विरुद्धको खोप किन लगाउने?
डा शेरबहादुर पुन शनिबार, चैत ५, २०७८, ०६:०९:००
'एलो फिबर' संक्रमण नेपाल लगायत एसियाली देशहरुमा चासो वा प्राथमिकतामा पर्ने संक्रामक रोग भने होइन। तर जो कोहि अफ्रिका वा दक्षिण अमेरिकी देश जाँदै हुनुहुन्छ भने 'एलो फिबर' विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाएको हुनुपर्दछ। पछिल्लो समय बर्षेनी नेपालीहरु विभिन्न कारण/उद्देश्यले अफ्रिकी मुलुक जाने क्रम बढ्दो देखिन्छ। अस्पतालमा 'एलो फिबर' विरुद्धको खोप लगाउन आउनेहरुको संख्याले पनि यहि संकेत गर्दछ। खासगरी यहि समयमा मात्र धेरैले 'एलो फिबर'को नाम सुनेको पाइन्छ। तर 'एलो फिबर' र खोप आवश्यकताको बारेमा भने धेरैलाई थाहा नहुन सक्दछ।
'एलो फिबर' संक्रमण एडीस जातको लामखुट्टेबाट सार्ने 'एलो फिबर भाइरस' को कारणले हुने गर्दछ। यो संक्रमण हुँदा शरीर पहेँलो देखिने भएकोले 'एलो फिबर' नाम दिएको हो। यसलाई रक्तश्राब गराउने (भाइरल हेमोरेजिक फिबर) भाइरसको रुपमा पनि लिने गरिन्छ। संक्रमण भएको ३ देखि ६ दिन भित्रमा लक्षण देखिने गर्दछ।
'एलो फिबर'को लक्षण दुई चरणमा देखिने गर्दछ। लक्षण दोश्रो चरणमा प्रवेश गरे संक्रमित मध्ये लगभग आधीको मृत्यु १० दिन भित्र हुनसक्दछ।
पहिलो चरणमा देखिने लक्षणहरु:
१) ज्वरो आउने।
२) टाउको र जिउ दुख्ने।
३) वाक वाक वा बान्ता हुने।
४) खान मन नलाग्ने।
दोश्रो चरणमा देखिने लक्षणहरु:
१) उच्च ज्वरो आउने।
२) नाक, मुख,आखा तथा पेटमा रक्तश्राब हुने।
३) कलेजो तथा मृगौलाको काम प्रभावित हुने।
४) आँखाको सेतो भाग र छाला पहेँलो देखिने।
पहिलो चरण तीन चार दिनमा समाप्त हुने गर्दछ। तर यी संक्रमित मध्ये झन्डै १५ प्रतिशत २४ घण्टा भित्र कडा लक्षणहरुका साथ दोश्रो चरणमा प्रवेश गर्ने गर्दछ। यसको विशेष औषधि नहुने र लक्षणको आधारमा उपचार गर्नु पर्ने भएकोले खोप नै 'एलो फिबर' विरुद्धको सबैभन्दा प्रभावकारी र सुरक्षित उपाय मानिन्छ। खोप नेपालमा सहज उपलब्ध पनि छ। विश्व स्वास्थ संगठनकाले यो खोप विशेष गरेर ९ महिना मुनिका बालबालिका, गर्भवती, अन्डाको एलर्जी भएका र विभिन्न कारणले (रोग वा औषधि प्रयोगको कारणले) रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नभएकाहरुलाई भने यो खोप नलगाउन सुझाएको छ।
-(डा शेरबहादुर पुन शुक्रराज ट्रोपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालको क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक हुन्।)
काठमाडौंमा हैजा फैलँदो! यी ३ कुरामा ध्यान दिउँ
यी ५ लक्षण देखिए हैजाको शंका!
रेबिज खोपको नयाँ तरिका र तालिका